Construction Safety by Aye Nyein 1390 views
How to apply industrial safety stan... by Aye Nyein 4979 views
ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားအား အလုပ္ခန္႔ထားျ... by Aye Nyein 1016 views
ၿမန္မာ့အေၿပာင္းအလဲအတြက္ နိုင္ငံသားတ... by Aye Nyein 1321 views
Myanmar labor law and practice2 by Kaung Htet Zaw 2080 views
Jp verbiest myanmar 19 july 2012 by Sasin SEC 1072 views
, Safety Professional
Workplace Safety and Health, conducted at Public Works Department, Naypyidaw on 4th May, 2012 by U Aye Nyein.
You need Zawgyi font to read it.
Dear Saya U Aye Nyein, I'd love to haveacopy of your presentation because I couldn't read. Thanks soe.myint.than@gmail.com
1. ဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥWorkplace Safety and Health OfficerEnvironmental Control Officer(Singapore)ဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥ
2. ဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥ ဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥ
3. Quality Control Plan - ဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥSafety Plan - ဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥEnvironmental Plan - ဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥSocial Concern - ဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥ= ဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥ(ဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥ)Employment Ratio (ဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥ)(ဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥ)ဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥ ဥဥ ဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥ ဥဥ ဥဥ
4. ႏႏႏႏႏႏႏႏႏႏႏႏႏႏႏႏႏဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥႏႏႏႏႏႏႏႏႏႏႏႏႏႏႏႏႏႏႏႏႏႏႏႏႏႏႏႏႏႏႏႏႏႏႏႏႏႏႏႏႏႏႏႏႏႏႏႏႏႏႏႏႏႏႏႏႏႏႏႏႏႏႏႏႏႏႏႏႏႏႏႏႏႏႏဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥ- Foreign Workers Employment ActဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥQuality Control Plan , Safety Plan, Environmental Plan, Social Concern -ဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥ
5. ႏႏႏႏႏႏႏႏႏႏႏႏႏႏႏႏႏႏႏႏႏႏႏႏႏႏႏႏႏႏႏႏႏႏႏႏႏႏႏႏႏႏႏႏႏႏ (Available Resoruces)ဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥႏႏႏႏႏႏႏႏႏႏႏႏႏႏႏႏႏႏႏႏႏႏဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥ
6. COSTQUALITY DELIVERY SAFETY ENVIRONMENTHEALTHႏႏႏႏႏႏႏႏႏႏႏႏႏႏႏႏႏႏႏႏႏႏႏႏႏႏႏႏႏႏႏႏႏႏႏႏဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥ/ဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥ+ဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥ/ဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥ/ဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥ/ဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥ
7. ဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥ-ဥ) ဥဥဥဥဥ) ဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥ- - -
10. ဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥ- ဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥ ဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥ ဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥ ဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥ ဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥ ဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥ ဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥ ဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥ ဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥ ဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥ
11. ဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥ- ဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥ ဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥ ဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥ ဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥ ဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥ ဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥ ဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥ ဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥ
12. ဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥ ဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥ ဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥ ဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥ ဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥ ဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥ ဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥ ဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥ
13. ဥဥဥဥဥဥဥဥဥ ဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥ ဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥ ဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥ ဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥ ဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥ
14. ဥဥဥဥဥဥ ဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥ ဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥ ဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥ ဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥ ဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥ
16. ဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥThe Factory Act – 1951ဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥ- ဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥ- ဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥ
18. ဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥ(ဥဥဥဥဥဥဥဥ- ဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥ)ဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥ ဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥ
19. ဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥ- ဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥ- ဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥ ဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥ ဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥ ဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥ ဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥ
20. ဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥ- ဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥ75kgf persquare meterဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥ220kgf per squaremeterဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥ
21. ဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥ- ဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥ
22. ဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥ(ဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥ)ဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥ ဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥ
23. ဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥ- ဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥ- ဥဥဥဥ
24. ဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥ- -SS 562 : Code of practice for safety in trenches, pits and other excavated areasSS 567 : Code of practice for factory layout – Safety, health and welfareconsiderationsSS 553 : Code of practice for air-conditioning and mechanical ventilation inbuildingsSS 513 : 1 Personal protective equipment - Footwear - Safety footwear
25. ဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥ ဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥ ဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥ ဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥ ဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥ ဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥ ဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥ
26. ဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥ ဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥ ဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥ ဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥ ဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥ ဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥ- ဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥCP/SS ဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥ
27. ဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥ ဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥ ဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥ ဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥ ဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥ
28. ဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥ ဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥ ဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥ ဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥ ဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥ
29. ဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥ-Workplace Safety And Health (Safety And Health ManagementSystem And Auditing) Regulations 2009
30. ဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥ(ဥဥ) ဥဥဥဥဥဥဥဥ1. Safety Policy2. Safe Work Practices3. Safety Training4. Group Meeting5. Incident Investigation and Analysis6. In-house Safety Rules and Regulations7. Safety Promotion8. Evaluation, Selection and Control of Sub-contractors9. Safety Inspections10. Maintenance Regime for all Machinery and Equipment11. Hazard Analysis12. The Control of Movemnet and Use of Hazardous Substances an Chemicals13. Emergency Prepardness14. Occupational Health Programs
31. ဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥ- ဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥ ဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥ ဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥ ဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥ ဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥ-- ဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥ
32. ဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥ ဥဥဥဥဥဥဥဥဥ ဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥ ဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥ ဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥ ဥဥဥဥဥဥဥဥ- - ဥဥဥဥ
33. ဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥ ဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥ ဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥ ဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥ
34. ဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥ ဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥ ဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥ ဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥ ဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥ- ဥဥဥဥ ဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥ
35. ဥဥဥဥ- ဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥ-ဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥ(Material Safety Data Sheet – MSDS)ဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥ ဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥ ဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥ ဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥ ဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥ ဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥ ဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥ ဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥ ဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥ- - ဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥ
36. ဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥ(ဥ) ဥဥဥ ဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥ ဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥ ဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥ- ဥဥဥဥ-ဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥ ဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥ- ဥဥဥဥ-ဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥ
37. ဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥ ဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥ ဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥ ဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥ ဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥ ဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥ ဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥ ဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥ(ဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥ)
38. ဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥ ဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥ ဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥ ဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥ- - ဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥ(ဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥ) ဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥ- ဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥ ဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥ ဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥ ဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥ-
39. ဥဥဥဥဥဥဥဥဥ(ဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥ) ဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥ- - ဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥ ဥဥဥဥဥဥဥ- Ear Plug or Ear Muff ဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥ ဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥ ဥဥဥဥဥဥဥ ဥဥဥဥဥ(Dust Mask) - - ဥဥဥဥ
40. ဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥ ဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥ ဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥ
41. ဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥ ဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥ ဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥ- - ?????
42. ဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥ ဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥ ဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥ ဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥ
43. ဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥ( Water Quality ) ??? ဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥ(ဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥ) ဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥ-ဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥ(ဥဥဥဥ) ဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥ(Centralize System) ဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥ ဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥ
44. ဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥ(ဥ) - ဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥ ဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥ (ဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥ)======================== ဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥ???ဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥ-ဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥ ဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥ???
45. ဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥ ဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥ ဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥ ဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥ ဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥ ဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥ ဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥ ဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥ ဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥ ဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥ ဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥ
46. ဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥ ဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥ ဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥ ဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥ- - ဥဥဥဥ ဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥ ဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥ ဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥ- - ဥဥဥဥ ဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥ ဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥ
48. ဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥ ဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥ ဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥ ဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥ ဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥ- ဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥ
49. ဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥ- ဥဥဥဥဥ(ဥ)ဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥ
50. ဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥ- ဥဥဥဥဥ(ဥ) ဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥ
51. ဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥ-ဥဥဥဥ- ဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥ ဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥ ဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥ ဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥ ဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥ ဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥ ဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥ
52. ဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥ ဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥ ဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥ ဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥ ဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥ ဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥ ဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥ ဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥ ဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥ
53. ဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥ ဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥ ဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥ ဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥ ဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥ ဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥ ဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥ
54. ဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥ- ဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥ- ဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥ ဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥ ဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥ ဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥ ဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥ ဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥ ဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥ
55. ဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥ- ဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥ ဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥ ဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥ ဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥ ဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥ- ဥဥဥဥ ဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥ
56. ဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥ ဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥ ဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥ ဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥ ဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥ
57. ဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥ ဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥ(ဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥ) ဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥ
58. ဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥ ဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥ ဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥWHY CALIBRATION IS SO IMPORTANT ???ဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥFlow Meter ဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥcalibrate ဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥcalibration certificate ဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥ
59. ဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥ ဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥ ဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥ ဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥ ဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥ ဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥ ဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥ ဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥ ဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥ ဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥ Game ဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥဥ
ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားအား အလုပ္ခန္႔ထားျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒ